मधेशको मानको सवाल भएको भन्दै रविराजलाई नेपाल लोकस्टारको विजेता बनाउन मधेशी समुदायका युवाहरु कम्मर कसेर लागेको देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति : १४ भदौ, २०७६ , ११:४९:०० बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपालको सबभन्दा ठूलो सिंगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल लोकस्टार’मा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका एकमात्र मधेशी अनुहार रविराज साहले भोटिङतर्फ अग्रता कायमै राखेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार : नेपाल लोकस्टार : भोटको लागि रविराजको अपिल, यसरी गर्न सकिन्छ भोट !
टप ११ बाट टप १० मा छनोट भएर आएका १० जना प्रतियोगी मध्ये रविराज सबैभन्दा अत्याधिक भोटका साथ अग्र स्थानमा रहेको नेपाल लोकस्टारका प्रोड्युसर सहदेव कोईरालाले न्यूज ब्यूरोसँग भने । रविराजले जम्मा कति भोट पाए भन्ने न्यूज ब्यूरोको प्रश्नमा उनले भोटको संख्या खुलाउने नियम नभएका कारण भोट संख्याबारे खुलाएनन् ।
सम्बन्धित समाचार : मधेशले 'सुष्मा' को ऋण 'रविराज' लाई तिर्दै, पाए सबभन्दा बढी भोट !
यद्यपि अहिलेसम्म उनको यात्रा सुखद रहेको र अगाडिका यात्रा पनि सुखद कायम रहने विश्वास लिएको उनले बताए । उनले भने, ‘रविराजजी आफ्नो दमदार प्रस्तुतिका साथ अहिले सबैभन्दा अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ । उहाँको प्रस्तुतिको जादु भनौं, मधेशबाट मात्रै नभएर समग्र नेपालबाटै साथ र समर्थन पाइरहनु भएको छ । यो राम्रो संकेत हो ।’ अगाडि भने, यस्तै रहने हो भने रविराजजी गन्तव्यसम्म पुग्न अवश्य नै सफल हुनुहुनेछ । आशा गरौं, अगाडि पनि सबै राम्रो नै रहनेछ ।’
राविराजको सुरिलो आवाज र दमदार प्रस्तुतिका कारण जजहरुले समेत उनको खुलेरै प्रशंसा गर्दै आएका छन् । उनी दावेदारी बलियो बनाउँदै गएपनि उनको अगाडिका यात्राका लागि मूख्यतः भोट नै निर्णायक हुनेछ । अगाडिका राउण्ड प्रवेशका निम्ति जजको मात्र २० प्रतिशत माक आवश्यक हुन्छ भने ८० प्रतिशत बाहिरकै भोट चाहिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार : नेपाल लोकस्टार : रविराजको लागि भोटिङ खुल्ला, तपाई छुट्टिनुभयो ?
एपीवान टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहको नेपाल लोकस्टारको बलिया दावेदार मानिएका रविराजलाई फाईनल राउण्डसम्म पुर्याउन धेरैभन्दा धेरै भोटको आवश्यकता छ । रविराजलाई जिताउन मधेशी युवाहरुले विभिन्न ठाउँ तथा समाजिक संजालमा ‘रविराज जिताउ’ अभियान जारी राखेका छन् ।
विभिन्न माध्यमले भोटको लागि सहयोग गर्नेहरुप्रति नतमस्तक हुँदै रविराजले पहिलेभन्दा अब बढी भोटको आवश्यकता रहेकाले भोटको लागि सशक्त र प्रभावकारी अभियान चलाउन आग्रह गरेका छन् । गन्तव्य नजिक पुगेका उनी अगाडिका राउण्डमा पनि भोटिङ तर्फ अग्र स्थानमै रहयो भने इतिहास रच्न सक्छन् ।
टप १० मा छनोट भएर आएका प्रतियोगीहरुका लागि लोकस्टार आयोजकले सोमबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि आधिकारिक भोटिङ खुल्ला गर्दैछ । भोटिङको अन्तिम समय शुक्रबार दिउँसो १२ बजेसम्म हुनेछ । रविराजलाई मोबाईलबाट सिम कार्ड तथा आईएमई एप मार्फत् भोट गर्न सकिनेछ । लोकस्टारमा अत्याधिक मत पाउनेले अगाडिका राउण्ड सिधैं प्रवेश पाउनेछ ।
सम्बन्धित समाचार : नेपाल लोकस्टार : मधेशमा 'रविराज जिताउ' अभियान, टप १० का लागि भोटिङ खुल्ला
आउँदो शुक्रबार ८ः४५ बजे टप ९ को फाईनल प्रशारण हुनेछ । यतिबेला टप १० मा रहेका १० जना प्रतियोगी मध्ये हरेक एपिसोडको फाईनलबाट एक–एकजना गरी नेपाल लोकस्टारको फाईनल राउण्डसम्म ५ जना बाहिरिनेछन् । ‘टप ५’ मा सेफ हुने ५ जना प्रतियोगी क्रमशः विजेता घोषित हुनेछ ।
मधेशको मानको सवाल भएको भन्दै रविराजलाई नेपाल लोकस्टारको विजेता बनाउन मधेशी समुदायका युवाहरु कम्मर कसेर लागेको देखिएको छ । संगित क्षेत्रमा मधेशका उदयमान रविराजलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन सबैको साथ र सहयोगको खाँचो देखिएको छ ।